Umkhiqizi kanye Nomphakeli Wezindiza Zase-Wholesale | Ngesikhathi
Ukuthunyelwa Kwezindiza Ezivela eChina - Amanani Amanani Ahamba Phambili E-Air Cargo International Cabanga ndawonye Ukubambisana yigama elisetshenziswe kakhulu, kepha liyahamba lichaze izinsizakalo zethu ezigxile kumakhasimende. Si ...
Izindiza Zezindiza Ukuthumela Kusuka eChina - Amanani Amanani Ahamba Phambili Kumhlaba Wonke
Ukubambisana yigama elisetshenziswe kakhulu, kepha kuyahamba ngendlela ethile ekuchazeni izinsizakalo ezigxile kumakhasimende ethu. Silwela ukuletha okuningi ebuhlotsheni kunendlela elula yokufinyelela kumakhasimende akho emhlabeni jikelele.
Okwamanye amazwe imithwaloukudlulisela phambili ngokuvamile kuyisenzo sokulinganisa phakathi kwesikhathi, izindleko kanye nokukhathazeka kwemvelo. Lesi ngesinye sezizathu sokuthi izinkampani zikhethe i-GZ Ontime ngenani elisebenza kahle, elibushelelezi lempahla yazo. Njengabo, ungaqiniseka ukuthi ukusebenzisana kwethu okuhlelekile emhlabeni wonke kukunikeza ukuguquguquka kokukhetha kusuka kubanga lomoya nolwandleimithwaloizinketho zesevisi. Yenzelwe ngaphandle komthungo izidingo zakho eziqondile, zigcwaliswe ngokubonakala kokuphela kokuphela.
Sinikeza izinsizakalo zezindiza ezisuka eChina ziye kwamanye amazwe, noma singakusiza ukungenisa eChina. Okwezindiza eziya e-Europe, ngokwesibonelo, ukubambezeleka kokudluliswa kwempahla yomoya kufika ezinsukwini eziyi-7, okushesha ukwedlula izinsuku ezijwayelekile ezingama-35/40 ngolwandle.
Inethiwekhi yethu yozakwethu abahlolwe kahle isivumela ukuthi siphathe ukuthunyelwa kwakho kancane nangokulibaziseka okuhle kakhulu.
Izimpahla ezihamba emoyeni zisebenziseka kahle kuzo zonke izinhlobo zemikhiqizo, kusukela entekenteke kunazo zonke kuya kwezisindayo.
Imithethonqubo yomoya iqine kakhulu, yingakho sibeke konke ukunaka kwethu ekuhloleni ngokuphelele izicelo zakho. Ngemuva kwalokhu kuhlaziywa okunembile kwesidingo sakho, amaqembu ethu azokuqinisekisa ngomsebenzi wokuthuthwa kwempahla ohambelana ngokuphelele nokulindela kwakho, izidingo zakho kanye nohlobo lwezimpahla zakho.
Ukuthunyelwa komoya emhlabeni jikelele kungaba inqubo eyinkimbinkimbi, ngokuphathwa, imithetho kanye nokuthola amanani ezomnotho kakhulu kanye nomzila ongabhekana nawo. Siyaqonda ukuthi lokhu kungacindezela kanjani, ngakho-ke masenze lula i-ukuphathwa kwezinto kwakho.
Ithimba lethu elinolwazi kakhulu lingasiza ngazo zonke izingxenye zenqubo yokuthumela. Ngakho-ke, awudingi ukwethuka njengoba siqinisekisa ngensizakalo ethembekile futhi engenazinkinga ngokuphelele.
Uma usikhetha, noma ngabe udinga okuningi ezinsizakalweni zasemoyeni, sizohamba ngaphezulu nangaphezulu ukwenza ngezifiso ukulethwa okuhle. Senza konke nakho konke ukwenza konke kwakhoezokuthutha isipiliyoni ukuhlangabezana okulindele.
2.I-DDP (Umsebenzi Wokulethwa Wokulethwa), i-DDU (Umsebenzi Wokulethwa Ongakhokhiwe)
Ezweni ezokuthutha amalungiselelo
6.Convenient mpahla kokulandela
Ukupakisha okuphephile ne-crating
Isikhathi se-GZ singahlala siziqhenya ukukunikeza ulwazi lwethu lokuthumela phakathi kweChina emhlabeni ngezidingo zakho kwi-Air Freight.
Langaphambilini Izimpahla Zasolwandle
Izimpahla zomoya ze-DDP
Ukuthunyelwa komoya kwe-DDP